Vavaka ho an'i Masindahy Mikaely arkanjely ho an'ny fitiavana.? Fahavalo sy fiarovana.
Vavaka ho an'i Saint Michael ilay arkanjely dia ny miditra el tontolo feno ady ara-panahy satria ity Arikanjely ity, izay miseho amin'ny tantara ao amin'ny Baiboly, dia naseho ho mpiady avy any an-danitra izay nirahina tety an-tany hiady amin'ireo adintsika ara-panahy.
Afaka mangataka ny fanampianao ianao amin'ny fotoana ilainay, vonona hatrany izy hanampy antsika hiady ara-panahy amin'ireo tolona tsy mety hiady ara-batana.
1 Vavaka ho an'i Saint Michael ilay arkanjely Iza no Saint Michael ilay arkanjely?
1.1 Vavaka ho an'i Saint Michael ilay arkanjely ho amin'ny fitiavana
1.2 Ny vavak'i Masindahy Michael Arkanjely hiadiana amin'ireo fahavalo
1.3 Ny vavaka fiarovana
1.4 Ny Vavaka mba hahitana asa
Vavaka ho an'i Saint Michael ilay arkanjely Iza no Saint Michael ilay arkanjely?
Mba hanazavana hoe iza i San Miguel, dia afaka manomboka isika amin'ny filazana fa ny anarany dia manana ny dikan'ny hoe "Andriamanitra".
Iray an'ny Archangels lehibe satria ny anarany dia voatonona ao amin'ny soratra masina manarakaraka an'i Archangel Rafael sy Gabriel. Kapitenin'ny milisy any an-danitra sy ireo anjely hafa dia mankato ny baikony.
Hatramin'ny niandohan'ny finoana Kristiana dia i Md Michael dia hita fa mpiady izay nahavita nandresy ny fahavalo ratsy fanahy Satana sy ny demoniany rehetra tamin'ny sabany mirehitra mahery.
Mpiambina sy mpiaro mahatoky izy izay hitandrina ny fiainantsika sy ny fianakaviantsika ary ny fananana amin'ny fomba tsara indrindra.
Vavaka ho an'i Saint Michael ilay arkanjely ho amin'ny fitiavana
Andriamanitra mamonjy anao, arkanjely Masindahy Michael nandresy, voatahy ary be voninahitra indrindra ary tena ankasitrahan'Andriamanitra indrindra, ankehitriny amin'ny fahoriako izao dia miantso anao aho, miantso anao amin'ny finoana aho, ary mangataka fanampiana sy fiarovana mahasoa anao;
Miangavy anao aho mba handringana ny angovo ratsy rehetra mety hisy fiantraikany amiko, ampio aho amin'ny hazavana masina anananao ary amin'ny alàlan'ny herinao mahery vaika sy haingana no tadiaviko hahitana ny faniriako tanteraka.
Arkanjely Mikael mpiambina ny vavahadin'ny Lanitra, omeko anao ny fankasitrahako amim-panetren-tena noho ny fanompoana izay omenao ahy foana ary ny antony hahafantarako fa hanampy ahy amin'ny olan'ny fitiavako ianao:
(lazao izay tadiavinao)
Oh, arkanjely Mikaela, printsy selestialy, anjeliko mpiambina! Manontany anao tamim-panetren-tena aho mba hihaino ny feoko ary ampidiro ao am-poko ny fiadanam-pitiavana tiako indrindra.
Tsy afaka miaina amin'ny fiadanana aho ary feno fiadanam-bolo ny fanahiko.
Azoko atao fotsiny ny manasitrana ny aretiko sy manala ny alaheloko satria manana ny fitiavana:
Oh, arkanjely Mikaela, printsy selestialy, anjeliko mpiambina, henoy ny feoko! Amin'ny anaran'ny Ray, amin'ny anaran'ny Zanaka, ary amin'ny anaran'ny Fanahy Masina.
manam-pahaizana amin'ny fitiavana mahatoky sy fitiavana tsy miova, feno ny fitiavan'Andriamanitra izay ny Ray any an-danitra mihitsy no nandroaka niaraka tamin'ny fanatrehany manokana.
Tsy misy olona tsara kokoa noho izy hanampy antsika amin'ireo olana momba ny fo izay mitondra olana be amin'ny fiainantsika.
Na eo aza ny mahazo fitiavana, ny hanitsy ny lalana, ny fanatsarana ny fiarahana na ny fitarihana antsika handray fanapahan-kevitra tsara izay manan-danja.
Aoka isika hanazava ny lalana tsara tokony halehantsika sy hanampy antsika amin'ny fotoana rehetra.
Ny vavak'i Masindahy Michael Arkanjely hiadiana amin'ireo fahavalo
be voninahitra San Miguel ArcangelIanao izay niady tamin'ny ady mangidy indrindra tamin'ny iraky ny ratsy sy ny fankahalana;
ianareo izay mivoaka mandresy avy amin'ny hadalan'ny fahavalo sy ny ratsy;
ianao izay mivoaka avy amin'ny fandrika ratsy nataon'ny andrianan'ny maizina, miaro ny olombelona rehetra tsy ho eny an-tsofiny, miangavy anao aho, hatolotrao ahy ny fiarovanao amin'ireo rehetra maniry ny ratsy sy hisorohana ny fitaovam-piadian'ny devoly ho miady amiko.
Karakarao ny fahavalo mangina, ny ratsy, ary ampio aho mba hanana ny rariny, hany ka miaraka amin'ny fihetsiko, tsy misy manafintohina na ho tezitra, ary mifanohitra amin'izany kosa, miaina amin'ny fihavanana amin'ny olona hanatona an'Andriamanitra miaraka am-pahamendrehana.
Omeo ahy fandresena amin'ny fahavalo sy ny ratsy rehetra.
Mitantara ny niandehany ny tantara reseo ny fahavalo mandra-pandroakany any an-danitra.
La Malagasy Izy dia manolotra azy ho mpiady mahery izay afaka atokisana hanampy antsika hiady amin'ny ady ara-panahy sy ara-batana amin'ny fotoana rehetra.
Ny ahiahy dia miteraka fiahiahiana satria matetika ny ady na ny fanelingelenana dia tsy tapaka ao amin'ny fiainantsika.
Ny fananana mpiara-miasa any an-danitra izay miantso ny anjarantsika no zava-dehibe satria ny ady amin'ny ara-panahy dia tsara lavitra noho ny fidirana amin'ny fanamelohana amin'ireo fahavalo izay manelingelina antsika mafy.
Ny vavaka fiarovana
Ry Masindahy Michael Michael arkanjely, printsy ary mpitarika ny tafika any an-danitra,
Custodian sy mpiaro ny fanahy, mpiambina ny fiangonana, mpandresy, horohoro ary horohoro amin'ireo fanahy mikomy feno fikomiana.
Mangataka aminao am-panetren-tena izahay, manondro ny hanafaka ireo olon-dratsy rehetra atokisantsika amin'ny fahatokiana;
enga anie hiaro anay ny fankasitrahanao, enga anie ny herinao hiaro anay, ary izany, amin'ny alàlan'ny fiarovanao tsy manam-paharoa, dia afaka mitombo hatrany amin'ny fanompoana ny Tompo isika;
enga anie ny hatsaran-toetrao manandrana anay isan'andro amin'ny fiananay, indrindra amin'ny fahitana ny FAHAFATESANA, ka, arovan'ny herinao amin'ilay dragona infernaly sy ny fandrika rehetra ao aminy, rehefa miala amin'ity tontolo ity izahay dia hatolotray anao, tsy manan-tsiny rehetra, eo anatrehan'ny Mpanjaka Andriambavy.
Raha mila fiarovana ianao, izany no vavak'i Saint Michael Archangel marina.
Ny mpanompo mahatoky izay miaro sy mikarakara ireo zanak'Andriamanitra izay eto an-tany ary izay, toy ny nanirahana azy taloha mba hanome fikarakarana ara-potoana, dia hanao toy izany amintsika indray.
Mpiambina mahery vaika izay miaro ny fianakavianay sy ny fananana azo antoka.
aterak'izany vavaka Ny isan'andro dia mitazona antsika amin'ny finoana hoe misy olona mikarakara antsika amin'ny ratsy sy ny loza rehetra izay miharihary foana eo amin'ny fiainantsika andavanandro.
Ny Vavaka mba hahitana asa
San Miguel Archangel lehibe, fa mipetraka eo akaikin'ny Avo Indrindra ianao.
Tamin'ity andro ity aho dia niondrika mba hangataka anao tsy hanao asa intsony.
Betsaka ny olona ankoatra ahy dia miankina amin'izany. Manantena ny fitahianao ho an'ny anio ihany aho, rahampitso ary hahatongavako hatrany ny asako sy ny vokatra tsara indrindra. Fantatro tsara fa nanafaka ireo fanahy very tao amin'ny purgatory ianao.
Miangavy anao aho mba hampamokatra ny asako isanandro isan'andro tahaka izay efa nisy hatrizay.
Te hanampy amin'ny loharanom-piasana aho, satria amin'izany dia hahatsiaro tena ho afa-po amin'ny tenako aho rehefa mahita fa samy faly ny asako sy ny ahy.
Ry Masindahy Michael Arkanjely, mivavaha ho anay ary henoy ireto teny ireto.
Mivavaha amin'ny vavak'i Masindahy Michael Arzahay ahazo asa amin'ny finoana be dia be.
Ny asa fanompoan'ny anjely azy dia mifantoka ihany koa amin'ny fanampian'ireo izay tsy dia mankasitraka, ka izany no antony hanaovana ny vavaka nataon'i Md Michael hahazoana asa Lasa fitaovam-piadiana mahery vaika izay azontsika ampiasaina alohan'ny hanaovana ity dinidinika asa ity hanampy antsika sy hanome antsika fahasoavana eo alohan'ny hafa.
Ny fiangonana kristiana katolika maneran-tany dia manasa antsika hanao fandavan-tena ho an'io arkanghelim-pinoana io, miaraka amin'ny finoana fa afaka manampy antsika hahazo asa mendrika ho antsika izy, hiaro ny tenantsika amin'ny loza rehetra, hiaro antsika amin'ny ratsy rehetra ary hiambina antsika.
Tsy afaka manangana vavaka isika na inona na inona antony raha tsy ataontsika izany amin'ny finoana avy amin'ny fo fa avy any an-danitra no hanomezana antsika ny fahagagana ilaintsika.
Eny, tsy misy valiny mazava sy mivantana kokoa noho izany.
Mino izahay izay lazain'ny tenin'Andriamanitra aminao momba ny vavaka ary izany no mahatonga anay hino fa raha manainga vavaka amin'i Md Michael Arkanjely dia ho avy amin'ny antsoinay tahaka ny nataony Izy taloha.
Mila manam-pinoana fotsiny isika rehefa mivavaka amin'ny vavaka mahery ho an'i Saint Michael ilay Arkanjely.
Saint Mark, vavaka mahery
Vavaka mafy ho an'i Saint Charbel